Lionel Messi oo ka sameeyay rikoodh cajiib ah kulankii xalay ay guusha ka gaareen kooxda Villarreal – Gool FM
(Spain) 06 Luulyo 2020. Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa halkiisa ka sii waday wax qabadkiisa horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii uu kooxdiisa ku hoggaamiyay inay guul ka gaarto naadiga Villarreal.
Barcelona ayaa xalay guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Villarreal oo ay ku booqatay Estadio de la Ceramica, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-4, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba Lionel Messi ayaa ciyaartii xalay wuxuu caawiyay labo gool oo ay kal dhaliyeen saaxiibadiis Luis Suarez iyo Antoine Griezmann.
Lionel Messi ayaa sameeyay gool caawintiisii 19-aad horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan, waana caawintiisii ugu sareysay uu kabtanka Barca ka sameeyo inta lagu gudi jiro hal xilli ciyaareed, wuxuuna jabiyay rikoorkiisii xilli ciyaareedkii 2014-2015 isagoo sameeyay 18 gool caawin.
Messi ayaa ciyaaray 38 kulan xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan, wuxuuna ku guuleystay inuu dhaliyo 27 gool, wuxuuna caawiyay 24 gool kale, taasoo ka dhigan inuu si toos ah kaga qeyb qaatay 53 gool ay dhalisay kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan.